YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, January 11
11 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2092K View Download
11 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
4007K View Download
Maung Wunna passes away.pdf
11 Jan 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/11/20110အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတခုက သတို့သား လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖိအားပေးခံရ
ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ မောင်မင်းဆုမွန် နဲ့ မခင်ဝါဝါလှိုင် တို့ရဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် Movie5 မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မောင်မင်းဆုမွန် ဟာ သူ့အလုပ်တာဝန်ထဲမှာ အထက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖိအားပေးခြင်းကို ခံရပါတယ်။
သတိုးသား မောင်မင်းဆုမွန်ဟာ Movie5 မှာ တာယူဝန်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် ထူးအိမ်သင် နဲ့ ညီအကိုတော်စပ်သူလည်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မိသားစုခြင်း ရင်းနှီးသူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် လာတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေဘက်က အမြတ်ဒေါသဖြစ်ပြီး မောင်မင်းဆုမွန်ကို လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်စာတင်ခိုင်းတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
Movie5 မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ မောင်မင်းဆုမွန်ရဲ့ အပေါင်းအသင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွေက သူ့ကို အလုပ်က ထုပ်ပစ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ပါ မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး ထွက်စာဝိုင်းတင်ကြပါတယ်။ ခုဆိုရင် ရုံးသူရုံးသား အပေါင်းအသင်း တွေအားလုံး အလုပ်ထွက်စာဝိုင်းတင်ကြတဲ့အတွက် အထက်အာဏာပိုင်တွေက မောင်မင်းဆုမွန် အပါအဝင် ထွက်စာ တင်သူအားလုံးကို အလုပ်မှာ ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားလိုက်ရတယ်လို့ Movie5 အသိုင်းအဝိုင်းမှ ပြောပြလာတဲ့အတွက် သိရှိရပါတယ်။
ပေးပို့သူ … လွင်မြင့်
အာဏာရှင်ကြီးတို့ရဲ့ မြေးလေးတွေ ပုံပါအတိုင်း စားစရာ ဝတ်စရာမရှိ မြင်ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ
မန္တလေးမြို့ ဘုရားပွဲတစ်ခုရဲ့ မိုးရေထဲ ရွှံ့ဗွက်ထဲမှာ အဝတ်ဗလာနဲ့ အစာရေစာ ငတ်ပြတ်ပြီး မိန်းမောနေတဲ့ ကလေးငယ်နဲ့ မိခင်
read more at http://www.demowaiyan.co.cc/2011/01/blog-post_7729.html
42148535 Letter to Former Comrades Abroad
SYCB monthly Bulletin for December (Vol.4, Issue-47)
SYCB Monthly Bulletin for December (Vol-4, Issue-47
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ Mr Paul Gorve နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ လာရောက်
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ Mr Paul Gorve နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တောင်ဒဂုံရှိ မဖြူဖြူသင်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည့် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှူ
တော်လှန်ရေးအတွက် သူတို့ အစပျိုးလမ်းဖွင့်ပေးမှု
စစ်အစိုးရရဲ့ စစ်မူမထမ်းမနေရ ဥပဒေကြောင့် ထောင်ကျမှာ စိုးလို့ စစ်တပ်ထဲ ၀င်သွားကြမည့် လူငယ်တွေ က ရှိကြမှာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းတွေ ဟာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပဲခေါ်ခေါ်၊နိုင်ငံရေးအင်အားစု တွေက ဖန်တီးပုံဖေါ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတာ က နည်းလွန်းပါတယ်။ တကယ်တမ်း ၈၈၈၈ ဆိုတဲ့ ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီးမှာတုန်းက တောင်မှ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတစ်ချို့ က မင်းတို့ သောက်ရူးလေးတွေ ငါတို့ တောင် တစ်သက်လုံးလုပ်လာတာ နေ၀င်းကိုဘာမှတ်နေလို့ လဲ၊အုတ်နံရံခေါင်းနဲ့ မတိုက်ကြနဲ့ လို့ ပြောဖူးခဲ့တာတွေကို အမှတ်ရနေမိပါတယ်။ နောက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းတွေဟာ စစ်တပ်က အစပျိုးလိုက်ခဲ့တာချည်းပဲဖြစ်နေ
တာကိုသတိထားမိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ၈၈ အစ မှာ ပိုက်ဆံတွေ သိမ်းတယ်။ ကိုဘုန်းမော်တို့ ကိုစိုးနိုင်တို့စတဲ့ ကျောင်းသားအာဇာနည်တွေကိုပစ်သတ်တယ်။ တံတားနီ အရေးအခင်းကြီးဖြစ်ပေါ်တယ်။ ဒီလိုပဲ နောက်နောက် အရေးအခင်းတွေ ကိုကြည့်ပါ၊နောက်ဆုံး လောင်စာဆီတိုးမြှင့်တာ သူတို့ လုပ်တယ် ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ က အစပျိုးပြီးလမ်း လျှောက်ပြတယ်။ ၂၀၀၇ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးပေါ်လာတယ်။ ကဲ အခု တော့ လာပြန်ပြီ ၊တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို စိန်ခေါ်တဲ့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ အမိန့် ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက် တိတ်တိတ်လေးပြန်တမ်းထုတ်တယ်။ အခုသူတို့ ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံသားအာဇာနည် ညီအကိုမောင် ၊နှမ အမျိုးကောင်းသားတွေက ငြိမ်ခံနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေချာပါတယ် ။ ဘယ်နိုင်ငံရေး သမားတွေ က မှ မျှော်လင့်မထားတဲ့ တော်လှန်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။ တော်လှန်ရေးအတွက် လူငယ်များအားလုံးလက်တွဲညီညီ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရရာနေရာ၊ရောက်ရာအခန်းကဏ္ဍက နေပြီးစကြပါတော့မယ်။ ငါးပွက်ရာငါးစာချ၊ ဟိုနားစု၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နား ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့ ၊ကိုယ့်နံမည်သတင်းထဲပါဖို့ ၊တကယ့် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ပဲ မယောင်ရာဆီလူးနေသူများကိုတော့လူငယ်တွေ ၊ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်၊ရဲမေများက ရှောင်ရှားကြမှာပါပဲ။ ထိုသူတွေကလဲ ရှောင်သွားကြမှာပါပဲ။ အခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရုံးချုပ်သွား၊ လက်တွေ့ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပဲ နံမည်ကြီးဖို့ ၊လုပ်စားဖို့ ဒေါ်စုဘေးကပ်နေကြသူတွေ အတွက် ဒီတော်လှန်ရေးမှာ နေရာ မရှိပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လေးစားတဲ့ သူတွေက ဘာနံမည်မှ အဖေါ်ပြမခံပဲ နောက်ကွယ်မှာ တကယ်အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ ဒါကို ဘယ်လိုမှ ထုတ်ဖေါ်ပြောလို့ မရလို့အခုလို Guiding Stars များဆီကို ပို့ ပေးလိုက်တာပါ။ သူတို့ တွေ က ဒေါ်စုကို အသုံးချဖို့ လုပ် ဆောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်စားကြသူများပါတယ်။ တကယ်လုပ်ဆောင်နေသူ က လက်ခ်ျိုးရေလို့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ လုပ်နေတဲ့ဦးဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့မွေးထားတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်တို့နဲ့အနီးကပ်လုပ်ဆောင်နေသူ ထောင်ထွက်တစ်ချို့ က နံမည်ယူ လုပ်ဆောင်နေတာဟာ သိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကို ဘဘ ဦးတင်ဦးက အရည်အချင်း ရှိသယောင်ပြောသွားတာက တော့ ကျန်တဲ့တကယ်လုပ်တဲ့သူတွေက အရည်အချင်းမရှိသလိုဖြစ်သွားတာမို့ အတော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကျနော်တို့ က တော့ ဒေါ်စုတို့ ဘေးမှာ တကယ် ဒေါ်စု ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို ဘာသာပြန်မှန်မှန်လုပ်ပြီး
ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား စစ်စစ်များဖြစ်ကြပါ တယ်။ အမည်ခံတွေလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ထောင်ထဲမှာ လဲ နေခဲ့ဘူးသူတွေများပါတယ်။ လုပ်စား နံမည်ခံလုပ်နေသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံလိုက်၊ မဲပေးရေး တွေ လုပ်လိုက်၊ဒေါ်စုပြန်လွတ်လာတော့ဒေါ်စုဘေးကပ်လိုက်၊နံမည်မွေးနိုင်ငံရေးလုပ်စား နေသူ ၊စိတ်မူမမှန်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးကို အချစ်အမှန်းကင်းကင်းနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုး၊ နိုင်ငံသားများအကျိုးကိုသာလုပ်ဆောင်နေကြပြီး တော်လှန်ရေးစစ်စစ်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ် နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ အခု စစ်အာဏာရှင်များအစပျိုးလမ်းဖွင့်ပေးမှုအပေါ် တိုက်ပွဲခေါ်သံကို စတင်ပြီး အမြန်ဆုံး တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများနှင့်လက်တွဲ ကာ စစ်ကျွန်ဇာတ်သွင်းမှု ကို အမြန်ဆုံးတော်လှန်ကြပါစို့။။ အရေးကြီးပြီ ညီနောင်အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့ ။။။
Posted by Guiding Star at Tuesday, January 11, 2011
Posted by ငွေလမင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/11/2011 1 အကြံပြုခြင်း
ဝါးလုံး အလှူခံတော်မူပါဘုရား ၊ အလှူခံတော်မူပါဘုရား
စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဆိုတဲ့ဥပဒေ သာ အမှန်တကယ် တည် ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ သွေး ချင်းတို့ ကို တွေးမိတာလေး ပြော ပြချင်ပါ တယ်။
အညာဒေသ တစ်ခုရဲ. ရွာလေးနှစ်ရွာကြားမှာ တောင်ကျချောင်းလေးတစ်ခုခြား နေပါတယ်။ ချောင်းကလေးက သိပ်မကျယ်လှပေမဲ. တံတားမဆောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက် အဲဒီနှစ်ရွာကြား ဖြတ်သန်း သွားလာ လိုသူ မည်သူမဆို ချောင်းရေ ကူးရပါတယ်။ လှေနဲ့ ကူး တဲ့ အလေ့ အထလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင်. ဒူးလောက် ပေါင်လည် လောက်သာရှိတဲ့ ချောင်းရေကို ကူးရတာ မခက်လှပေမဲ့ တောင်ပေါ်မှာ မိုး ရွာလို့ရေကျလျှင် တော့ရေစီးသန် လှသလို နက်လည်း နက်ပါတယ်။
တနေ့ မှာ တော့တဖက်ရွာမှာ အလှူရှိ တဲ့ အတွက် အခြားရွာဘက်မှာ သီတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့ဆရာတော်ကို အလှူရေစက်ချတရား ချီးမြှင့်ပေး ပါရန် အလှူရှင် ကလျှောက်ထား လာ ပါတယ်။ ကံဆိုး ချင်တော့အလှူနေ့ မှာပဲတောင်ပေါ်မှာ မိုးသဲလို့ချောင်းရေက လက်ခုတ်တဘောင်ကျော် လောက်ထိ နက်ပါတယ်။ ကျေး လက်က ဒါယိကာ/မ များက ဆရာတော်တို့ ကို ပင့်ဖိတ်သည့်အခါ ကုန်လမ်း ခရီးအတွက် လှည်းနဲ့ အကြိုအပို့စီစဉ်လှူဒါန်း ကြပေမဲ ၊ ဒီချောင်း ရေကတော့ဆရာတော်လည်း ရေကူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်နှင့် ဒါယိကာတစ်ယောက် ဟာအတူ ရေကူးကြပါတယ်။ ချောင်းလယ် လောက် ရောက်တော့ဆရာတော်ရေနစ်ပါတော့ တယ်။ အတူပါလာတဲ့ ဒါယိကာက ဆရာတော်ဘုရား လက်ပေးပါဘုရား၊ ဆရာတော်ဘုရား လက်ပေးပါဘုရား လို့ အကြိမ်ကြိမ် လျှောက်တင်ပေမဲ့ဆရာတော်ကလက်မပေး ဘူးတဲ့ ။့ ဒါယိကာက ဆရာတော် ဘာကြောင့်လက်မပေး တာ လည်း လို့ စဉ်း စားတဲ့ အခါ၊ အဲဒီဆရာတော်ဟာ နှမြောတွန်.တိုလှတယ်လို .နာမည်ရှိသတဲ့ ။
ဒါနဲ့ဒါယိကာက အင်း ဒီဆရာတော်တော့ငါမပါးနပ်လျှင် အသက် ဆုံးရှုံး ရချည်ရဲ့ လို့တွေးမိသ တဲ့ ။ ဧကန်တ ငါလျှောက်တင် တာ ပေး ဆိုတဲ့ စကာလုံးပါလို့ ဖြစ်ရမယ်။ နောက်တမျိုး လျှောက်တင် ကြည့် အုံး မယ် ဆိုပြီး ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဝါးလုံး အလှူခံတော်မူပါဘုရား၊ အလှူခံတော်မူပါဘုရား၊ အလှူခံတော်မူပါဘုရား---- လို့ ပြောင်းပြီးလျှောက်တင် သတဲ့ ။ အဲဒီအခါမှ လက်ပေး တော်မူသတဲ့ ။
အထက်က အဖြစ်အပျက် ကလေးနှင့်စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဆိုတဲ့ဥပဒေ နှင့်ဆက်စပ်တွေး တော ကြည့် မိပါတယ်။ ကျမတို့ ရဲ့ဘဘတပ်ချုပ်ကြီး ကလည်း ပြည်သူလူထုကို လူအရင်းအမြစ် ဖွံဖြိုး မှုတွေ အတွက် ပညာရေး ၊ စီးပွာရေး၊ ကျန်းမာရေး မတည် ပေးရမည်။ တည်ဆောက်ပေးရ မည်။ စောင့်လျှောက်ပေး ရမည်။ အဲဒီ ပေး ဆိုတဲ့စကာလုံးက ဘဘတပ်ချုပ်ကြီး နှင့်သဟဇာတ ဖြစ်ဟန် မတူပါ ဘူး။ တိုင်း ပြည်ရဲ့ ပြည်သူလူထု ဆီက ရသမျှ အကုန်လိုချင်ပါ တယ်။ အား လုံးသိကြတဲ့အတိုင်း တိုင်းပြည်ဧ။ိ အရင်း အမြစ် အား လုံး ကို သဘောရှိသုံး ပြီး လုပ်အာပေး စေခိုင်း တာတွေ၊ ကလေး စစ်သား အတင်းအကြပ်စုဆောင်း တာတွေ ရှိနေခဲ့ တဲ့အပြင် စစ်တပ်အင်အားကို ပြည်သူတွေ ဆီက အလကား မတ်တင်း ယူချင် ပြန်ပါတယ်။
စစ်ရေးကို နားမလည် တဲ့ပြည်သူတွေကို စစ်တိုက်ခိုင်း မယ်ဆိုရင် အရေအတွက်ပဲ တိုးလာ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်း တက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမြင်မိပါတယ်။ အခုခေတ်က နည်း ပညာ မြင့် မားမှု က အဓိက ကျတာ ပါ။ ဘဏ် ဖောက်ထွန်း ဝိဇ္ဖာ တွေကို ကြည့် ခြင်း ဖြင့်သိနိုင်ပါ တယ်။ အရင်တုန်းက ဘဏ် ဖောက်ထွန်း ဝိဇ္ဖာ ၊ သော့ ဝိဇ္ဖာ တွေဟာ ဘဏ်ကို ကိုယ်တိုင် သွားပြီးဖောက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုသွားစရာ မလိုတော့ ပါဘူး။ (On line) ကနေ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေကို (bank account, etc.) ယူပြီး ငွေအမြောက်အများ ကို ခိုးယူဖောက် ထွင်း နိုင် ကြပြီဖြစ် ပါတယ်။ နောင် ဆယ် စုနှစ်တွေဆီ လှမ်း မျှော်ကြည့် လိုက်မယ် ဆိုရင် စစ်ရေး မှာ လည်း စစ်မြေပြင် ကို သွားစရာ မလိုတော့ပဲ (by control system) တိုက်ခိုက်နိုင် တဲ့ခောတ် ကို ရောက်မလာ ဘူး လို့ဘယ်ပြော နိုင် မလဲ။ အ ခုတောင် မောင်းသူ မဲ့လေယာဉ် ပျံသန်း နိုင်ကြပြီပဲ။
သို့ အတွက် ကြောင့်ပြည်သူတစ် ယောက် အနေဖြင့်တပ်ချုပ်ကြီးက ခွင့်ပြု မည် ဆိုလျှင် ဒီလိုတင်လျှောက်ချင်တယ်။
နောင် အနှစ် ၂၀ ကြာသော် မြန်မာနိုင်ငံသား (စစ်ဆင်ရေး အတွက်) တီထွင် ပညာရှင် အမြောက်အများ ကို ဘဘတပ် ချုပ်ကြီး စစ်တပ်သို့ပင်စင်ယူချိန် ထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် လှူဒါန်း ပါမည်။ (စစ် ရေး အတွက် နိုငိငံ ခြားငွေ အမြောက်အများ သုံး ရန်မလိုတော။့ )
တီထွင် ပညာရှင် များ မွေးထုတ်ရန် ဘဘကြီး ပိုင်ဆိုင်မှုဧ။် ၁၀ % မျှ ကိုသာ တိုင်း ပြည် ဧ။် အနာဂါတ် ရင်သွေး ငယ်တို့အတွက် ပညာသင်စရိတ် မ တည် ပေး ပါရန် လျှောက် တင်ကြောင်း ပါ ဘုရား။
အတန် ကြာစဉ်းစား ပြီး
အိမ်း အနှစ် ၂၀ အရေး မျှော်တွေးကာ အရင်း အမြတ် တွက်ချက် ပြီး သော်၊ ဒီဆုလဒ်ကို ပေး သနားတော် မူ စေဗျား - - - - -
၁၂. ၁. ၂၀၁၀
ရင်နှင့် အမျှ - ၁
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတခ...
အာဏာရှင်ကြီးတို့ရဲ့ မြေးလေးတွေ ပုံပါအတိုင်း စားစရာ...
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ Mr Paul Gorve ...